Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.5.6 Final famolavolana toro-hevitra
Ankoatra ireo 5 ankapobeny famolavolana fitsipika, te hanatitra roa hafa tapa-torohevitra. Voalohany, ny fanehoan-kevitra avy hatrany mba mifanena rehefa soso-kevitra ny fiaraha-miasa faobe tetikasa "Tsy misy olona mety handray anjara." Mazava ho azy fa mety ho marina. Raha ny marina, ny tsy fahampian'ny fandraisana anjara no lehibe indrindra izay mety miatrika tetikasa fiaraha-miasa faobe. Na izany aza, matetika no miseho izany fanoherana avy nieritreritra momba ny toe-draharaha eo amin'ny fomba diso. Maro ny olona manomboka amin'ny tenany sy miasa avy: "sahirana aho; Dia tsy mba hanao izany. Ary, Tsy fantatro na iza na iza izay hanao izany. Noho izany, tsy nisy olona hanao izany. "Tsy manomboka amin'ny tenanao sy miasa avy, na izany aza, dia tokony hanomboka amin'ny mponina ny olona mifandray amin'ny aterineto sy ny asa. Raha 1-in-a-tapitrisa ireo olona mandray anjara, ny tetikasa dia mety ho fahombiazana. Fa, raha 1-in-a-lavitrisa ny olona handray anjara, dia ny tetikasa dia mety ho tsy fahombiazana. Koa satria ny zavatra manindry mandry Tsy mety amin'ny fanavahana ny iray-in-a-tapitrisa sy ny iray-in-a-tapitrisa, dia tsy maintsy manaiky fa dia tena sarotra ny mahafantatra raha toa ka hiteraka ampy tetikasa fandraisana anjara.
Mba hanao izany bebe kokoa mivaingana, aoka ny hiverina ho Galaxy Zoo, ny olombelona astronomia computation tetikasa noresahina teo aloha ao amin'ity toko ity. Sary an-tsaina Kevin Schawinski sy Chris Linton, astronoma roa nipetraka teo amin'ny Pub any Oxford nieritreritra ny Galaxy Zoo. Izy ireo tsy ho tsaina-ary tsy afaka tsaina-fa Aida Berges-a mijanona ao an-trano renin'i 2 izay mipetraka any Porto Rico-mety hiafara amin'ny vahindanitra classifying-jatony isan-kerinandro (Masters 2009) . Na, Diniho izay nitranga tamin'i David Baker, ny Mpahay Simia miasa any Seattle Foldit-dalam-pandrosoana. Izy mihitsy no mialoha fa nisy olona avy any McKinney, Texas atao hoe Scott "Boots" Zaccanelli, izay niasa tamin'ny andro toy ny mpividy ny miditra tsimoramora orinasa, dia handany ny takariva mamoritra proteinina, farany fitsanganana ho maro 6 fandaharana amin'ny Foldit, ary Zaccaenlli mety, amin'ny alalan'ny lalao, manolotra ny famolavolana ho milamina kokoa Variant ny fibronectin izay Baker sy ny vondrona nahita ka mampanantena izy ireo nanapa-kevitra ny synthesize izany eo amin'ny laboratoara (Hand 2010) . Mazava ho azy, Aida Berges sy Scott Zaccanelli dia atypical, fa izany no herin'ny ny Internet; miaraka amin'ny olona an'arivony tapitrisa, dia mampiavaka ny mahita ny atypical.
Faharoa, nomena izany mialoha olana amin'ny fandraisana anjara, Tiako ny mampahatsiahy anareo fa ny famoronana tetikasa fiaraha-miasa faobe mety ho mampidi-doza. Afaka vola be dia be ny ezaka fananganana ny rafitra izay tsy misy dia atao ny mampiasa. Ohatra, Edward Castronova-mpitarika mpikaroka eo amin'ny sehatry ny toe-karena ny virtoaly tontolo, mitondra ny anie ny $ 250.000 avy ny MacArthur Foundation, ary tohanan'ny ny ekipa ny mpandraharaha-lany efa ho roa taona miezaka ny hanorina tontolo virtoaly ao izay mety hitarika fanandramana ara-toekarena. Tamin'ny farany, ny ezaka rehetra dia tsy fahombiazana; tsy misy olona te-hampiasa ny tontolo virtoaly Castonova (Baker 2008) .
Noho ny tsy fahazoana antoka momba ny fandraisana anjara, izay sarotra ny hanafoanana, dia milaza fa miezaka ny mampiasa mahia start-up teknika (Blank 2013) : hanao tsotra prototypes mampiasa eny-ny-talantalana rindrankajy ary jereo raha afaka mampiseho viability alohan'ny mampiasa vola amin'ny antsapaka ny fanao rindrambaiko fampandrosoana. Amin'ny teny hafa, rehefa manomboka mpanamory fitiliana, ny tetikasa dia tsy, ary tsy tokony ho polished-hijery toy ny Galaxy Zoo na eBird. Ireo tetikasa, araka ny izy ireo ankehitriny, dia ny vokatry ny taona ny ezaka amin'ny alalan'ny ekipa lehibe. Raha ny tetikasa dia handeha tsy-ary izay no tena mety, dia tsy te-hifady hanina.